Orinasa vokatra vita amin'ny vy manokana - Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra vita amin'ny metaly China
Kitapo PVC vita amin'ny embossed
Mpanokatra tavoahangy malefaka amin'ny PVC
Kitapo kitapo Silipo sy kitapo Silicone
Mpihinana zava-pisotro Neoprene / Neoprene Koozie / Can Cooler / Can Koozie
Noho ny fanohanan'ny orinasa miaraka amin'ny tranokala famokarana maherin'ny 64000 metatra toradroa sy mpiasa maherin'ny 2500 miampy ny zavamaniry elektrôlika mandeha ho azy farany sy ny milina fandefasana loko miloko malefaka, dia mihoatra ny mpifaninana aminay ny kalitaon'ny avo indrindra, ny manam-pahaizana manokana, ny fahatsorana ary ny kalitaon'ny vokatra tsara indrindra izahay, indrindra ho an'ny be dia be takiana fotoana fohy na sarotra drafitra mila mpiasa za-draharaha. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpiasanay efa za-draharaha dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hahazoana antoka fa fahafaham-po ny mpanjifa.
Aza misalasala mandefa ny volavolanao miaraka amin'ny masontsivana ho anay, Dongguan Pretty Shiny Gift Co., Ltd. no loharano ho an'ny kalitao, ny lanja ary ny serivisy.
Dongguan Pretty Shiny Gift dia natokana hanome ny fotoana fanaterana malefaka sy ny fifehezana kalitao ao an-trano mba hahazoana antoka fa vokatra tsara ny vokatra metaly fanao, ny entana ao anatin'izany ny tsimatra, ny rojo vy, ny medaly, ny cufflink, ny mari-pamantarana ny fiara, ny vola madinidinika, ny mpanokatra tavoahangy, ny kojakoja golf toy ny fitaovana divot, clip clip ary marika baolina sns. Ataonay mora ny fizotran'ny fanafarana entana namboarina! Ny ekipa mpivarotra matihanina dia eto hanampy. Izahay dia hitari-dàlana anao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fomba tonga lafatra, hanampy anao amin'ny fisafidianana karazana plating, ary hanampy anao hamantatra ny habeny mety amin'ny toe-javatra misy anao, ny fampiharana ary ny volavola. Ho eo izahay isaky ny dingana!
Tavoahangy tavoahangy divay / tampon'ny divay / Sto ...
Karatra Metal / Karatra mpikambana VIP Metal / Metal Busi ...
Pin Lapel Pin / Fiaramanidina 3D Pin / Miniatur ...
Badge Firefighter / Pin Lapel Ho an'ny Afo ...
Kavina miaramila / peratra fifaninanana / Custom Aw ...
Medaly marathon / medaly famaranana / hazakazaka virtoaly ...
Medaly loka / medaly bespoke / medaly manokana / ...
Medaly fahatsiarovana / Medaly Souvenir / Souv ...
123456 Manaraka> >> Pejy 1/12